B2C CRM dị oke mkpa nye ndị ahịa na-eche ihu azụmaahịa | Martech Zone
Ndị ahịa n'ahịa taa nwere ike karịa mgbe ọ bụla ọzọ, na-achọsi ohere maka itinye aka na azụmaahịa na ụdị. Ike mgbanwe dị ukwuu na ndị ahịa emeela ngwa ngwa ma hapụ ọtụtụ ụlọ ọrụ na-arịa ọrịa nke ọma iji jikwa ozi ọhụụ niile ndị ahịa bidoro inye ụzọ ọhụrụ.
Ọ bụ ezie na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkaibe ọ bụla na-azụ ahịa na-eji ọrụ CRM eme ihe iji jikwaa ndị ahịa na atụmanya, imirikiti ha dabere na teknụzụ dị afọ iri - ma haziri ha iji jikwaa ahịa B2B. Imirikiti ụlọ ọrụ na-adabere na ndekọ ederede ndị ahịa dị iche iche n'ime POS, eCommerce, ma ọ bụ nyiwe ahịa nke na-adịghị ekekọrịta data na ibe ya. Ewubere iji kwado ụdị ochie ahụ nke gụnyere ọtụtụ usoro ịzụ ahịa na-arụ ọrụ, ihe ngwọta ndị a enweghị ike ịnye foto zuru oke nke ndị na-azụ ahịa oge a ka ha na-abanye ma pụọ ​​na ntanye ahịa ọtụtụ oge, na ọwa dị iche iche na ntụpọ dị iche iche tupu ha agbanwee.
Isi okwu bụ na sistemụ arụmọrụ na CRM dabere na akụrụngwa ochie adịghị arụ ọrụ na ijikwa ndị ahịa nke oge a. Ihe omuma ha nyere na-adabere na silos, di iche site na ihe amutara site na uzo ndi ozo na mmekorita; nke a na - egbochi ya ịjikọta data ndị ahịa ọhụụ na ezigbo oge iji gosipụta nkọwa ziri ezi banyere njem ịzụ ahịa ọhụụ, nke dị mgbagwoju anya na nke na - abụghị nke.
Nke a bụ ihe kpaliri m ịmepụta ENGAGE.cx, ụdị CRM zuru oke nke e wuru site na ala iji nyere ndị azụmaahịa aka ịmara ma wulite mmekọrịta na ndị ahịa ha. Amụrụ na igwe ojii, ikpo okwu a na-amụta omume ndị ahịa yana na-ekerịta data n'ofe ọwa niile, ọbụlagodi mgbasa ozi mmekọrịta, na ebumnuche nke ịnye ezigbo ọgụgụ isi ndị ahịa ebe ọ kachasị dị mkpa: njikọ aka n'otu n'otu n'etiti ndị ọrụ na ndị ahịa.
Ana m akpọ ya B2C CRM.
Gịnị kpatara B2C CRM?
Na ENGAGE.cx, anyị maara nke ahụ 80% nke uru gị na-ebute site na 20% nke ndị ahịa gị.
Were ya na gị na ndị ahịa a inwe mmekọrịta siri ike site na ị na-emekọrịta mmekọrịta dịka ndị ọbụbụenyi gị; ịmara ibe gị na ịghọta ụzọ kachasị mma iji kwurịta okwu n'ime ọnọdụ dị iche iche ị na-emekọrịta:
Mkparịta ụka ọ bụla gị na ndị enyi gị na-eme na-adabere n'akụkọ ihe mere eme, na ị maara ha ebumnuche iji tụlee ọnọdụ ọnọdụ mgbe ị na-ekwurịta okwu.
Mgbe ha na-akpọ, ederede, tweet, ị maara onye ha bụ - ụkpụrụ ha, ọchịchọ ha, na mkpa ha.
Mgbe ha zipụrụ gị ọdịnaya, ọ dị mkpa mgbe niile n'ihi na ha ma onye ị bụ.
Mgbe ha bịara n'ụlọ gị, ị maara otú ị ga-esi na-atụrụ ndụ, ị nwekwara ike ị drinkụ mmanya na-amasị ha.
Itinye mmata a na azụmahịa gị, ịchọrọ ka CRM gị nwee ikike ọ bụghị naanị ịkwado ụdị mmekọrịta ndị ahịa a kamakwa iji nyere aka wulite ndị ọhụrụ. Omenala CRM nwere nkwarụ n'ihi na ihe ọmụma ya ejedebere naanị na ọnọdụ na nkwa e mere iji mee.
B2C CRM ohuru gi gha aghota otu ndi ahia gi siri agbanwe n’oge njem ha zutara ya na Mmekorita nke anyi Cloud® na-agwa ndi n’oru ma nye ha ikike site n’inwe ọgụgụ isi ndị ahịa dị mkpa, a na-ewu ya n’elu ikpo okwu agafenụ nke na-agafe ọwa iji weghara na ịkọwa data omume.
B2C CRM Innovation: Ihe omuma ndi ahia
Mmekọrịta anyị Cloud na-enye nghọta, visibiliti na gburugburu ebe ndị ahịa gị nọ na njem ha. Nke a na - enyere ndị ọchụnta ego aka ịmara ụzọ kachasị mma iji tinye ndị ahịa n'oge ọ bụla na ebe ọ bụla na okwu ndị ahịa - gafee ọwa niile, mgbasa ozi, na ọnọdụ. N'ime oge, anyị na-ewu usoro ndụ oge maka ndị ahịa ọ bụla nke n'aka nke ya na-enye ọkwa ọgụgụ isi a na-enwetụbeghị ụdị ya nke enwere ike itinye n'ọrụ na ndị ahịa ọ bụla ma ọ bụ buru amụma na onye zụrụ mmadụ.
B2C CRM Innovation: Ike ndị ọrụ
Ndị ọrụ nọ n'okporo ụzọ nke itinye aka na ndị ahịa ma ọ bụkarị ihe kachasị mkpa na iwulite mmekọrịta ma na-eweta iguzosi ike n'ihe. Omenala CRM enweghị ike inye ha ozi ha chọrọ n'oge a iji bulie mmekọrịta ndị ahịa ọ bụla. A na-ewu Cloudgwé ojii Mmekọrịta kpọmkwem iji nye ndị ọrụ ziri ezi ezigbo data ndị ahịa na usoro ọ bụla nke njem ahụ. Were ya dị ka nkenke gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ndị ọrụ nwere ike ịduzi mmekọrịta ahụ.
B2C CRM Innovation: Ebumnuche nke Platform
Ndị na-enye ọrụ ọdịnala CRM amalitela ịtọgharị onyinye ha na-ahụ maka ahụmịhe ndị ahịa, mana a ka na-ewukwasị ha na ọkpụkpụ B20B CRM dị afọ 2 ma ọ bụ na-agwakọta ọtụtụ ihe enwetara ọnụ. Ọdịdị ahụ adịghị eme ka ịdị nkọ ma ọ bụ nzaghachi dị mkpa iji dozie ihe ndị ahịa taa chọrọ. Mmekọrịta Clouds na-ahazi ọgụgụ isi na oge ma na-akawanye amakarị n'akụkụ ọ bụla site na nhazi na nyochaa ezigbo oge ndụ ndị ahịa na omume.
Enwere ọtụtụ ihe ngwọta CRM n'ebe ahụ na-achọ ahịa B2C, mana belụsọ ma ebubere ebumnuche a iji wepụta mmekọrịta onwe onye na ndị ahịa n'ọtụtụ, ọ nwere ike ịkpọ onwe ya B2C? Ndị na-azụ ahịa taa na-agụ agụụ ịghọta; ha na-achọsi ya ike ma zaghachi ya. Site na itinye ezigbo B2B CRM n'ime ụlọ ọrụ ha nke teknụzụ, ụlọ ọrụ nwere ike mepee mmekọrịta na mmekọrịta n'etiti ndị ahịa, nke ahụ bụ isi ihe dị iche iche na-asọmpi na ngwa ọrụ maka ịga nke ọma.
Nwere ike ịmụ maka ihe ndị bụ isi nke B2C CRM yana otu esi eme ka ahụmịhe ndị ahịa baa ọgaranya site na ịlele akwụkwọ akụkọ ọcha anyị, Ihe kpatara onye Ahịa ji eche Azụmaahịa Achọrọ B2C CRM. Maka na anyị matara n'ịhụ ikwere, ị nwekwara ike ịtọọ nke onwe wepụta ebe a.
Tags: b2cCRMnjikwa mmekọrịta ndị ahịaENGAGE.cx
David Trice bu onye nchoputa na onye isi nke ENGAGE.cx, CRM na-eduzi ahụmahụ na-eduga maka ụlọ ọrụ. Tupu ịmalite ENGAGE.cx Trice bụ VP nke CRM na Oracle, ebe o duuru mwepụta nke Oracle's Fusion CRM.
Boomtrain: Ejiri ọgụgụ isi igwe rụọ maka ndị na-ere ahịa